Amashabhu wokuncishiswa kwentela kanye nama-seminar afundiswa ngochwepheshe
Inkampani Izinkampani Incorpised ithole ukuthi amalungu ayisishiyagalombili kwabayishumi omphakathi awazithatheli zonke izaphulelo zomthetho, amakhredithi, noma ukukhululwa okunikezwe ilungelo labo yi-IRS. Ngakho-ke, sinikezela ngohlelo kumakhasimende ethu lapho sisebenza khona ngokubambisana nezazi zentela eziphezulu kumthetho wezinkampani kanye nekhodi yentela ukubasiza ukwehlisa intela yabo ngezinga elikhulu kakhulu elivunyelwe ngumthetho.
Sizokwabela umxhumanisi wentela yomuntu siqu, umeluleki webhizinisi, kanye nobungcweti bezinkampani ukuze uthole ukusekelwa okungenamkhawulo nokubonisana. Leli thimba lizoba nawe hhayi ngesikhathi sentela kuphela, kepha ngaso sonke isikhathi uyiklayenti nathi.
Ukubuyekezwa kwembuyiselo yakho yeminyaka emibili edlule kuzokwenziwa emahhovisi kaRobert J. Greene, CPA noDennis P. Skea, osebenze iminyaka eyi-28 njenge-ejenti ephezulu ye-IRS.
Njengomphumela sivunyelwe ngumthetho ukuthi siguqise ukubuyiselwa kwentela edlule kuze kube yiminyaka emithathu uma isimo sakho sivumela lokhu futhi sithole amadola wentela oyikhokhe ngaphezulu i-IRS. Abalungiselela intela abaningi bavele bafake izinombolo emabhokisini amafomu entela, kepha empeleni sikunikeza amasu athile entela ukunciphisa umthwalo wakho wentela futhi ugcine imali ezandleni.
Ngokubheka imali yakho kanye namakhodi omthetho wentela singakuqinisekisa ukuthi ukhokha inani eliphansi ngokuphelele lentela. Uma singakulondolozi i- $ 3,000 kwimbuyiselo yakho akukho zindleko kuwe.
Ngokuhlola kwethu ngaphambi kokugcwalisa nokucwaningwa kwangaphambi kokuhlolwa kwemali okwenziwe yiqembu labachwepheshe bangaphambili be-IRS uzothola konke ukuncishiswa okusemthethweni, isikweletu nokukhululwa bese wenza labo ababhala babe semthethweni ngaphandle kokubangela ukuthi kube nokuhlolwa kwemali oyibuyile.
Ngaphezu kwalokho sinikezela ngezinsizakalo zokulungiselela intela ye-80% yamakhasimende esiwanikela ngawo.
Sizokuthumelela izinto zokufunda zomsindo ongazisebenzisa ngokuhlangana nensizakalo.
Isigaba sobuchwepheshe sentela sinikela amakhasimende ethu ngokuvikelwa kokuhlolwa kwamabhuku. Uma waziswa nganoma uluphi uhlobo lokucwaningwa kwamabhuku sizokumela mahhala.
Futhi uma singakongeli i-$ 3,000 kuwe izintela sizobuyisela imali yethu yokusebenza, futhi sizokuqinisekisa lokhu izinyanga eziyishumi nambili.
Imali yethu ingaphansi kwengxenye eyodwa kwezintathu izindleko zentela eqinisekisiwe $ 995 ngonyaka wokuqala. Uma futhi usivumela ukuthi senze insizakalo yakho yentela yebhizinisi sikuqinisekisa ukonga okuhlanganisiwe okungu- $ 5,000 ngentela ngentengo ye- $ 1,495. Uzofunda amasu wokunciphisa intela angahlala impilo yonke.
Ukuze ubhalise ohlelweni lokunciphisa intela, shayela omunye wabeluleki bethu kwa-800-830-1055.